ပလပ်စတစ် Injection လုပ်ငန်းစဉ် | မှထုတ်လုပ်သူကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်း Taiwan ,OEM,ODM-smd-reels.com
ပလပ်စတစ် Injection လုပ်ငန်းစဉ်
ကျနော်တို့ကနည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာများမှာ Taiwan ပလပ်စတစ် Injection လုပ်ငန်းစဉ် ထုတ်လုပ်သူ, စက်ရုံ, ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းနှင့်တင်ပို့သူ။ တည်ငြိမ်တဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအပေါ် မူတည်. ထက်သာလွန်အရည်အချင်းကိုနှင့်ကောင်းမွန်သောပြီးနောက်-ရောင်းချဝန်ဆောင်မှုကျနော်တို့စက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်ဦးဆောင်ထုတ်လုပ်သူများနှင့်တင်ပို့သူများတစ်ဦးအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကိုဖြစ်စေကြပြီ။ ကျွန်တော်တို့ဟာအရည်အသွေးထုတ်ကုန်များနှင့်စျေးနှုန်းအပြိုင်အဆိုင်နှင့်သင်တို့အဘို့အ-on အချိန် delivery မှာကတိပေးပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များနှင့်အတူနှစ်ရှည်စီးပွားရေးထူထောင်ခဲ့ကြပါပြီ။ သင်တို့သည်ငါတို့၏ထုတ်ကုန်မဆိုစံပြအတွက်စိတ်ဝင်စားပါက, အခမဲ့ဖြစ်ကျေးဇူးပြုပြီး ကြှနျုပျတို့ကိုဆကျသှယျရနျ.
ပုံစံ - 6-1-1
Guannming တစ်ဦးတည်းကိုထောက်ပံ့ပေး-ပလပ်စတစ်ဆေးထိုးခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်ဝန်ဆောင်မှုကိုရပ်တန့်,ဒီဇိုင်းအနေဖြင့်,မူကြမ်းရေးဆွဲ,3D ပုံနှိပ်ခြင်း,မှိုကုန်ထုတ်လုပ်မှု,အစုလိုက်အပြုံလိုက်ထုတ်လုပ်မှု.
သငျသညျပြီးသားနမူနာရှိပါက,ကျနော်တို့အလျင်အမြန်နမူနာများ၏ကုန်ကြမ်းဖွဲ့စည်းမှုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာနှင့် 3D မူကြမ်းဆွဲနိုင်ပါတယ်.အထူးလိုအပ်ချက်များကိုရှိပါတယ် အကယ်.,ကျနော်တို့နောက်ထပ် 3D ပုံနှိပ်ခြင်းဝန်ဆောင်မှုထွက်သယ်ဆောင်နိုင်ပါတယ်.နမူနာအတည်ပြုချက်ကိုပြီးစီးပြီးနောက်,မှိုဖှံ့ဖွိုးတိုးတအလျင်အမြန်ထွက်သယ်ဆောင်ပါလိမ့်မည်,20 ကျော်ပလပ်စတစ်ဆေးထိုးစက်တွေအစုလိုက်အပြုံလိုက်သင့်ရဲ့ထုတ်ကုန်ကိုထုတ်လုပ်ဖို့အဆင်သင့်ရှိပါတယ်.ဖောက်သည်များကအလွယ်တကူကျွန်တော်တို့ကိုလူအပေါင်းတို့သည်ပြဿနာများပစ်နိုင်ပြီးကျနော်တို့ကအမြဲတမ်းအများဆုံးယှဉ်ပြိုင်စျေးနှုန်းနှင့်အကောင်းဆုံးဝန်ဆောင်မှုပေးဖို့အဆင်သင့်ရှိပါတယ်.
999999999 http://schema.org/InStock USD 2020-12-31 https://www.smd-reels.com/my/plastic-injection-process.html